Kodzero-dzevanhu, 29 Zvita 2016
China 29 Zvita 2016
Zimbabwe Yobatana neSouth Africa Kuyedza Kudzivirira Njodzi muMigwagwa paZororo
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwevanhu nezvinhu Doctor Joram Gumbo vari kukurudzira vanhu kuti vatyaire dzimotokari vakangwarira njodzi.
Vane Makadhi emaATM Vorasikirwa neMari
Dambudziko rekushaikwa kwemari rave kupa vamwe vanhu vafambe namakadhi emaATM vachipihwa mari nevanenge vachida kutenga muzvitoro zvikuru vobhadhara kamutero kadiki.
Zimbabwe Yoshorwa neKutengesa Nzou kuChina
Hurumende yeZimbabwe iri kushorwa zvikuru nekutengesa nzou makumi matatu kuchina nemusi wechishanu.
Kusamira Zvakanka kweHupfumi Kwokanganisa Mutambo weTsiva
Gore rino mutambo wetsiva wakarasikirwa zvikuru mushure mekushaika kwaMuhammed Ali uyo akatora mukombe wehuremu weheavyweight katatu uyezve anotorwa semutambi akarura kukunda vese kubvira mutambo uyu watanga kutambwa.
Vamwe Vagari vekuMhangura Vanoti Vakafara Zvakanyanya paKisimusi
Kunyange hazvo vanhu vakawanda munyika vari kuchema kuti kisimusi ino vakashaya mari dzekufamba kuenda kumamisha nekutenga mbatya dzevana nezvekudya vamwe vagari vekuMhangura mudunhu reMashonaland West vainge vachifara nekupembera pazuva rekisimusi nemusi weSvondo.
Vanhu Gumi neVatanhatu Voshaya paKisimusi
Mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyathi vanoti vanhu gumi nevatanhatu vakashaya nemusi weSvondo pazuva rekisimusi.
Vanoita zveMitambo Votaura Zvavachaita paKisimusi
Nguva yeKisimisi inguva yekuzorora asi veruzhiji vanoda kutora nguva iyi kuita zvakasiyana siyana.
MDC-T Yobatsira Vanoshaya Kuti Vafarewo paKisimusi
Boka revechidiki rebato reMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai inoti rine hurongwa hwekubatsira dzimwe mhuri dzenhengo dzebato iri kuti dzive nezororo reKisimisi negore idzva rakanaka.